Fitadiavam-bola diso tafahoatra Faniriana handova no namonoan’i Tahina ny vadiny
Andro vitsy mialohan’ny nanafahan’i Tahina Ratovoniaina ny ain’ny andefomandriny, Hanitriniaina Annie Perle Randrianoely no nanontany ny rafozam-baviny izy raha maty Hanitra ka afaka mandova azy.
Ny vadiny izay tsy marary tsy marikoditra. Nanaiky am-pahatsorana ny rafozany. Tsiahivina fa ny
30 mey 2018 no nodarohany maritoa ka maty i Hanitra izay vadiny faharoa. Efa nanambady i Tahina
talohan’ny nanambadiany an’i Hanitra ny janoary 2018. Efa nandova ny antsasaky ny fananan’ilay
vadiny voalohany izay vita “divorce” taminy. Efa niseho ihany koa io fitiavan-karena mihoapampana io, ka na telo miandahy aza ry Hanitra vadiny dia nirifan’i Tahina ny tanin-drafozany teny Tsimbazaza ary nanaiky izany izy ireo. Nododosan’i Tahina hatrany ireto farany amin’ny fanoratana an’io tany io amin’i Hanitra ary efa nangataka ny vola handraisany an-tanana haingana ny fanoratana ny tany.
Vady mpanan-karena fahatelo
Efa nanana fofom-bady fahatelo koa i Tahina nandritra izany, izay nampanantenainy hatao mariazy
aminy ny volana jona 2018 ka izay no heverin’ny mpisolovavan’ny fianakavian’ny lasibatra fa
anton’ny famonoana ny mialohan’ny faran’ny volana mey an’i Hanitra. Voalaza fa tovovavy manan-
katao ara-pivelomana sady mpiasam-panjakana ambony io vehivavy fahatelo nokasainy hovadiana io
ary manana trano eto an-drenivohitra.Mialohan’ny hidirany tamin’ny fanambadiana an’i Hanitra dia nilaza i Tahina fa miasa fa omeny ny fianakaviany sahirana daholo ny karamany. Nony vita raharaha izy ireo, nangatahan’ny vadiny mba hoentina mody ny antsasa-karamany. Kinanjo nilaza i Tahina fa nikatona ny orinasa niasany. Tsy an’asa anefa izy. Nividianan’i Hanitra fiara karetsaka izy fa tsy nisy vola niditra izany. Nisy fotoana izy nilaza fa hanao “special” any Antsirabe mandritra ny faran’ny herinandro izay hitondra mpanambady. Kinanjo izy ilay mpanambady ara-pomba malagasy, tamin’io hateloana andro io izay nanatanterahany ny fisehoana sy fifamofoana tamin’ilay nampanantenainy mariazy ny volana jona. Marihina moa fa voaheloka higadra asa anterivozona mandram-pahafaty eny amin’ny fonjaben’ny Tsiafahy i Tahiana ny alakamisy teo, tany amin’ny Fitsarana Ambatolampy ary onitra ariary no alohany araka ny fangatahan’ny fianakaviana.